11 Septambra 2020 - FJKM Québec - Canada
10 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra
FILIPIANA 2 : 12-18
2:12 Koa amin’izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo.
2:13 Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.
2:14 Ataovy ny zavatra rehetra amin’ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana,
2:15 mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka hianareo, dia zanak’Andriamanitra tsy manana adidy eo amin’ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin’izao tontolo izao,
2:16 mitana ny tenin’ny fiainana, mba hisy ho reharehako amin’ny andron’i Kristy, ka tsy ho nihazakazaka foana aho na nisasatra foana.
2:17 Eny, na dia haidina ho fanatitra aidina eo amin’ny fanatitra sy fisoronan’ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra.
2:18 Ary aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miaraha mifaly amiko.
1-Miasà amin’ny maha-olona nohamasinina
Paoly Apostoly no manoratra ho an’ireto kristiana Filipiana ireto , izay nindraindrainy tamin’ny firaisana sy ny fatokiana ao amin’ny Tompo . Ny asa dia atao amin’ny fahamasinana , araka ny fanekena natao teo anatrehan’Andriamanitra . Tsy ilana dera , atao amin’ny fo feno fahazotoana . Miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra , tsy mila fireharehana na doka , ho fiheverana ny tena ho zavatra fa amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra . Manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina , ary miezaka hahavita izay ankatoavina .
2-Miasa amin’ny fahavononana (tsy mimonomonona)
Halavirina ny fo tsy madio sy ny fieritreretana tsy marina, ary ny fanahy malaina satria tsy fitiavan ny asan’Andriamanitra izany . Vitaina tsara ny adidy , tsy maka saina na mianatra ny ataon’ny olon-tsy marina any ivelan’ny Fiangonana , izay tsy hanao ny asa . Koa fadio ny fanaony . Ny Apostoly dia mampirisika mba ho vonona tsara sy ho marina amin’ny asa , ka ho vavolombelona amin’ny fampianarana natolony .
3-Miara-mifaly amin’ny asa atao
Ny fankatoavana an’Andriamanitra amin’izay atao no maneho ny fanompoana Azy amin’ny fatahorana ary manaiky ho fitaovana mahomby eo amin’izay asa anirahany. Miara-mifaly amin’ny zavatra rehetra atrehina, satria antso iray , asa iray . Mifalia mandrakariva fa ny asa atao am-pifaliana no sitrak’Andriamanitra hataontsika .
Mba niteraka fifaliana teo amin’ny fiainanao ve ny asa fanompoanao ao amin’ny fiangonana?